Pyae Phyo (MMiTD): September 2016
အမျိုးအစား: Android Root နည်းများ , xiaomi , မြန်မာဖော့င်
ကျတော်တို့ငယ်ငယ်ကဆော့ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ Bomber man ဆိုတဲ့ game လေးကို မှတ်မိကြအုံးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီ game လေးကလည်းလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ game လေးပါ။ ဒီ game လေးကိုအခု Android ဖုန်းများမှာဆော့ကစားချင်သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆော့ကစားလိုပါက Google Play Store ကနေတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Google Play မှအဆင်မပြေသူများအတွက်
♪ Android ဖုန်းတိုင်းမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသင့်တဲ့ Trust Go application ♫
Android ဖုန်းတိုင်းမှာဖြစ်တက်တဲ့ ကြော်ငြာတွေတက်တာတို့ , virus လင့်တွေတက်တာတို့ကိုနောက်ကွယ် ကနေမသိနိုင်ပေမဲ့ ဒီ apk လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီ apk လေး ကနေ Scan လုပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ apk တွေထဲကဖုန်းနဲ့မကိုက်တဲ့ apk တွေ့တာနဲ့ Trust Go apk လေးထဲမှာလာပေါ်လာပြီး uninstall ပြုလုပ်ခိုင်းပါတယ်။ သူပြောထားသလို uninstall ပြုလုပ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Android ဖုန်းတွေမှာဖြစ်တက်တဲ့ virus error ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ apk လေးနဲ့တစ်နေ့ တစ်ခါလောက် Scan လုပ်ပြီး သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းအတွက်စိတ်ချရပါပြီ။ Trust Go apk လေးကိုလိုအပ်ပါက ရယူနိုင်ပါတယ်။
♪ Android ဖုန်အသုံးပြုသူတွေအတွက် သုံးနေကျ apk တွေကို One Click နဲ့ထည့်မယ် ♫
Android ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအတွက် သုံးနေကျ application များဖြစ်တဲ့
5 Myanmar Ringtones
16 Skating Subway Surfers
22 MPT4U apk တွေကို One Click နဲ့ထည့်နိုင်မဲ့ bat ဖိုင်လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုဖို့ ဖုန်းမှာ USB Debugging တို့ Unknow source တို့ကို on ထားဖို့သာ
လိုအပ်ပါမယ်။ ဖုန်းကို Reset ချပြီး ဒါမှဟုတ် firmware ရေးပြီးလို့ apk တွေပြန်လည်ထည့်သွင်းချင်တဲ့အခါ
အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ လိုအပ်ပါက ရယူနိုင်ပါတယ်။
refer – san ko
အမျိုးအစား: Android Application , Android Tools
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရတာ ၀ါသနာပါပြီး နောက်ဆုံးထွက် Application များကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းအသုံးပြု နိုင်မယ့်အပြင် ဈေးနှုန်းကလည်း သင့်တော်တဲ့ KENBO Smartphone က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ E71 ဖုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဟာ လေးထောင့်ကျပြီး ထောင့်စွန်းများသည် အ၀န်း အ၀ိုက် ပုံစံရှိပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့တန်ဖိုးဟာ သင့်တင့်ပြီး မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင် အကျယ်အ၀န်းက ၅ လက်မရှိပြီး IPS Screen နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ဗီဒီယိုများ၊ ဂိမ်းများ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ မြင်ကွင်းစွမ်းရည် အပိုင်းတွင် 854 × 480 pixels အထိ ရုပ်ထွက်ရရှိစေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ ဖုန်းသုံးတဲ့ အခါမှာ သွက်လက်စေဖို့အတွက် Quad Core 1.3 GHz CPU ကို အသုံးပြု ပေးထားပါတယ်။ RAM ပမာဏ အပိုင်းတွင်တော့ 1GB ကို ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာ Data များများ ပိုမိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းရာမှာ သင့်တင့်မျှတစေဖို့အတွက် ROM 4GB ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
2G နဲ့ 3G မိုဘိုင်း ကွန်ရက်တွေမှာ ဖုန်းသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပြီး လိုင်းဆွဲအားကောင်းမွန် တဲ့အတွက် ဖုန်းစကားပြောတဲ့အခါမှာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ပြောဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Panorama ၊ Beauty Face နှင့် Live Photo စနစ်များကို Camera Function အဖြစ် ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး တဲ့အခါမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ခံစားချက်များကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့ဘက်ကင်မရာမှာ2megapixels စွမ်းရည်ရှိပြီး အနောက်ဘက် ကင်မရာမှာ 8 megapixels စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ စက်လည်ပတ်မှုစနစ်အတွက် Android 5.1 (Lollipop) ကို အသုံးပြုပေးထားခြင်းကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ ထွက်ရှိတဲ့ Application များကိုပါ Error မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ အလွယ်တကူ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Wi-Fi, GPS, FM, Bluetooth v4.0 စနစ်များပါဝင်ပါတယ်။ အားသွင်းအသုံးပြုရမယ့် ဘက်ထရီအမျိုးအစား မှာ Li-ion 1800mAh ဖြစ်ပါတယ်။
♪ NetGuide Journal Vol (4), Issue (53) (28.9.16) ♫
NetGuite ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဒဟူးနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ NetGuite ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ NetGuide ဂျာနယ် ၀ယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ NetGuide Journal Vol(4), Issue (54) ကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ 28-Sept ရက်နေ့ထွက်လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင်မပြေ သည့်နေရာဒေသမှသူငယ်ချင်းများအားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Sing! Karaoke by Smule ကို VIP Access Unlock ပြုလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်ကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်းဆုံး Sing! Karaoke by Smule နောက်ဆုံး Version ကို Play Store မှ ဒေါင်းယူပါ။ Play Store မှ အဆင်မပြေသူများကတော့ ဒီနေရာမှ တဆင့် ဒေါင်းယူပါ။
VIP Access ရဖို့ အသုံးပြုရမဲ့ Lucky Patcher Original Apk ကို ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ။
Lucky Patcher ကိုဖွင့်ကာ အောက်ပါအတိုင်း တဆင့်ချင်း ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပါ..
VIP Access ရသွားပါပြီ......
♪ Firmware , Box Setup အစုံပါပဲ တစ်နေ့ 20GB နှုန်းနဲ့ရယူနိုင်မဲ့နေရာလေး ♫
Firmware တွေ Box Setup တွေအပြင်အခြား မျိူးစုံဖိုင်တွေကိုရယူနိုင်မဲ့နေရာလေးပါ။ ဒါပေမဲ့တစ်နေ့ကို 20GB သာရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ရယူနိုင်ရန်အတွက်တော့ Gmail account လေးနဲ့ Sign-up လုပ်ပြီးဝင်ရပါမယ်။ များများ down ချင်ရင်တော့ Gmail များများသုံးပေါ့ဗျာ
အမျိုးအစား: Android Firmware များစုစည်းမှု , Firmware